Gedo:Baardheere oo maanta mar kala carar ka dhacay-Akhriso. 16/01/2013 :: goofgaduud.com
home > Gedo:Baardheere oo maanta mar kala carar ka dhacay-Akhriso. 16/01/2013
Gedo:Baardheere oo maanta mar kala carar ka dhacay-Akhriso. 16/01/2013
Wararka naga soo gaaraya Gobaka Gedo ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaana Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in maanta magaaladaasi hawadeeda sare lagu arkey dhowr diyaaradood oo kuwa dagaalka ah sida ay noo sheegeen dadka deegaanka.
Diyaaradaha dul hahabayey Hawada Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo ayaa dadka waxaa ay ku sheegeen iney ahaayeeen nooca dagaalka,hase ahaa waxaa aan la ogeyn halka laga leeyahay diyaradaha lagu arkey qeybo ka mid ah Gobalka Gedo,laakin waxaa loo maleynayaa in laga leeyahay dhanka Kenya.
Ka sokow Diyaaradaha oo lagu arkey hawada Magaalada Baardheere ayaan jirin wax kale oo dhibaato ay ka geysteen deegaanka,laakin shacabka ku dhaqan Magaalada ayaa ku kala cararay Guriyaha kadib markii cabso xoogan kala soo gudboonaatey.
Magaalada Baardheere oo diyaaradahan dagaalka lagu arkey ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Shabaab,wallow ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ay horey u sheegeen iney la wareegayaan Magaalada Baardheere oo ah Magaalada keli ah oo shabaabka ay maamulaan.